लगातार बढेर लाख पुगेको सुनको मुल्य, आज पत्याउनै नसकिने गरि यस्तो भयो – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/लगातार बढेर लाख पुगेको सुनको मुल्य, आज पत्याउनै नसकिने गरि यस्तो भयो
लगातार बढेर लाख पुगेको सुनको मुल्य, आज पत्याउनै नसकिने गरि यस्तो भयो
लगातार बढेर लाख पुगेको सुनको मुल्य, आज पत्याउनै नसकिने गरि यस्तो भयो ! नेपाली बजारमा आज सुनको भाउ स्थिर छ । बुधबार सुन ९४ हजार ५०० मा कारोबार भएको थियो । आइतबार ८ सय रुपैयाँले बढेर ९५ हजार ६०० मा कारोबार भएको सुन सोमबार स्थिर रहेको भएपनि मंगलबार भने ५ सयले घटेको थियो ।
मंगलबार ९५ हजार १ सयमा कारोबार भएको सुन बुधबार ९४ हजार ५ सयमा कारोबार भएको थियो । आज विहिबार पनि सोही मूल्यमा कारोबार भइरहेको छ । गत साताको पहिलो दिन आइतबार प्रतितोला २ सय रुपैयाँले बढेको सुन सोमबार ४ सयले घटेको थियो । मंगलबार सुन एकै दिन ८ सयले बढेको थियो । बुधबार ८ सयले नै घटेको सुन विहिबार भने प्रतितोला ९३ हजार ९०० मा कारोबार भएको थियो ।
शुक्रबार ९ सयले बढ्दै ९४ हजार ८ सयमा कारोबार भएको थियो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाए अनुसार तेजाबी सुनको आजको मूल्य ९४ हजार कायम गरिएको छ । यता चाँदीको भाउ भने आज ५ रुपैयाँ घटेको छ । आज चाँदी १ हजार २०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ।
आज पनि काठमाडौँ उपत्यकामा थपिए ३ जना कोरोना संक्रमित, यी स्थानका हुन् ति संक्रमित !!
बाबुले संसार छाडे आमा दुवै आँखा नदेख्ने छिन्, यी सानानानीबाबुहरु जस्ले खाने कुरा पाउँदैनन्, तरपनि कसरी बाँच्दैछन् ? (भिडियोसहित)
मध्यपहाडी लोकमार्ग अझै खुल्न सकेन
एनआरएनए साउदीले भन्यो : १० हजार भाडा तोक्दा पनि स्वदेश फर्कन सक्ने अवस्था छैन